तूफान इरमा: सेन्ट बार्थस, एu्गुइला, सेन्टमार्टिन, USVI, BVI
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » तूफान इरमा: सेन्ट बार्थस, एu्गुइला, सेन्टमार्टिन, USVI, BVI
एन्टिगुआ र बारबुडा ताजा समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • ब्रिटिश भर्जिन टापु (BVI) ताजा खबर • व्यापार यात्रा • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • निवेश • रिसोर्ट्स • सुरक्षा • सिन्ट मार्टेन ब्रेकिंग न्यूज • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अमेरिका भर्जिन टापुहरु ताजा समाचार
क्यारिबियनमा तुफान इरमा अझै रिकभरी मोडमा छ। नोभेम्बर १, २०१ 1 देखि शुरू हुने मौसमको लागि, निजी विला अपरेटर वाइम्कोले इरमाले प्रभावित टापुहरूको बारेमा रिपोर्ट दिन्छ:
IM%% विमको villa 96% भिला पोर्टफोलियोको खुला हुनेछ
हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने होटल कोठाको% 84% खुला रहनेछ
Restaurants० भन्दा बढी रेस्टुरेन्टहरू खुला रहनेछन्
सेन्ट बार्थ्सबाट WIMCO गन्तव्य निरीक्षण रिपोर्ट
हाम्रो यात्रा टोलीबाट उद्धरणहरू:
"...टापु आफैंको लागि - एक शब्दमा zingamazing! हामीले भ्रमण गरेका भिल्लाहरू ठूलो आकारमा थिए, र भिलामा इन्टरनेटले निर्दोष काम गर्‍यो, उपग्रह टेलिभिजनले हरेक दिन बिहानको समाचार उपलब्ध गराउँथ्यो, पोखरीहरू भरिएका थिए, र यस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन। बुटिक शप विन्डोजमा रंगीन डिस्प्लेहरू थिए, बाहिर खाने ठाउँका विकल्पहरू थिए र प्रायजसो किराना पसलहरू भरिएका थिए। ”
हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने villa० भिला मध्ये% 85% खुला रहनेछ
हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने होटलहरूको १००% खुला रहनेछ
शोआल बे र स्यान्टी ग्राउन्डमा छुट्टी मनाउनेहरूले प्राय: शीर्ष रेस्टुरेन्टहरू खुला रहनेछन्
एIM्गुइलाबाट WIMCO गन्तव्य निरीक्षण रिपोर्ट:
"एu्गुइला पूर्ण रूपले निको भइसकेको छ, सबै पूर्वाधार र सेवाहरू पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित छन् र हामी महिनौंभएला भिला पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दैछौं, र १०० वटा रेष्टुरेन्टहरू खुला छन्। पुरानो केस (परम्परागत रूपमा क्यारिबियन शैलीका घरहरू) बाहिर केही छतहरू छन्। तल झरेका रूखहरू वा झाडीहरू सहित क्षेत्रहरू। यसको बाबजुद पनि, एन्गुइला वास्तवमा हामीलाई पहिलेको भन्दा यो धेरै स्वच्छ देखिन्थ्यो। समग्रमा, टापु ठूलो आकारमा छ, र हाम्रो टापुको टीम अतिथीहरूको राम्रो हेरचाह गर्दछ। हामी कुनै पनि पाहुना निराश हुनेछ लाग्दैन।
हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने villa० भिला मध्ये% 45% खुला रहनेछ
सेन्ट मार्टिनबाट WIMCO गन्तव्य रिपोर्ट। हाम्रो यात्रा टोलीबाट उद्धरणहरू:
“कुनै सडकमा मलबेको थुप्रो छैन जहाँ तपाईं फ्रान्सेली सेन्ट मार्टिनको माध्यमबाट गाडी चलाउनुहुन्छ, यद्यपि धेरै भवनहरू अझै मर्मत भइरहेको र क्षतिग्रस्त भएको प्रमाण छ, यी सामान्यमा फर्कनको लागि समय लिनेछ। हामीले निरीक्षण गरेका २० भन्दा बढी भिलाहरू सबै राम्रै अवस्थामा थिए, र ग्राहकहरूलाई स्वागत गर्न तयार थिए। भोजन दृष्टिकोणबाट त्यहाँ राम्रो विकल्पहरू छन्। हामीले मेजा लुनामा जान प्रयास गरेका थियौं र यो पुरा रूपमा बुक गरिएको थियो जुन राम्रो संकेत हो, मारियोको कपिकोयमा हामीलाई स्वागत गरियो र त्यहाँको राती पनि रमाइलो थियो। अर्को ठूलो फेला पार्ने ठाउँ सिलिम्सन खाडीमा एलिनास थियो, उत्कृष्ट सुशी र अत्यधिक मनोरन्जनात्मक, हामीले यसलाई दुई पटक प्रयोग गरेर हेर्‍यौं! अर्को सकारात्मक इरमा पछि खोलिएको नयाँ व्यवसाय थियो। कोल बे सेन्ट मार्टिनको पेलीकान ब्रेउरीले सुड खन्याउन सुरु गर्‍यो र नमूनाको लागि केहि उत्कृष्ट बियर छ। लागुनिज बिस्ट्रो बार अर्को आकर्षण थियो। ग्रान्ड केसको रेष्टुरेन्टहरू प row्क्तिमा, केवल restaurants रेष्टुरेन्टहरू खुला थिए र यस क्षेत्रलाई आफ्नो पुरानो महिमामा फर्काउन महत्वपूर्ण कार्य बाँकी छ। सिम्पसन बे मरीना र हार्बर क्षेत्रहरूमा कसैले डुब्न डु boats्गा र क्षतिग्रस्त भूत जहाजहरू देख्न सक्छ। त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग कुराकानीबाट तिनीहरू भन्नेछन्, "हा, तपाईंले यो क्षेत्र २ महिना अघि देख्नु भएको थियो!" त्यसैले दैनिक सुधारहरू भइरहेको छ। यस टापुको अवस्थाको बावजुद धेरै व्यवसायहरू र आवासहरू अझै माथि सवार छ वा मर्मत गरिएको छ, जीवन जारी छ। व्यक्ति बाहिर र मजा गर्दै थिए। समग्रमा, यसले स्थानीयहरूको लचिलोपन देख्न राम्रो पाउँदछ, भिला राम्रो देखिन्छ, र रेष्टुरेन्टहरू जुन हामी गयौं। जबसम्म ग्राहकहरू जान्दछन् कि उनीहरू केमा पस्दैछन् र सेन्ट मार्टिन जान चाहन्छन्, हामीलाई लाग्छ उनीहरूसँग राम्रो समय छ, र यस टापुको अर्थव्यवस्थामा सहयोग पुर्‍याउन राम्रो लाग्नेछ। ”
सेन्ट जन, USVI
हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने villa० भिला मध्ये% 80% खुला रहनेछ
क्रुज खाडीमा रेस्टुरेन्टहरू फेरि खुलेका छन्
वेस्टिन सेन्ट जोन होटल शीतकालीन ब्रेक २०१ re पुनः खोल्ने मितिलाई लक्षित गर्दैछ
Caneel Bay होटेलले एक धन्यवाद २०१० पुन: खोल्ने मितिलाई लक्षित गर्दै छ
भर्जिन गोर्डा र BVI / उत्तर ध्वनि क्षेत्र
महो खाडी क्षेत्रमा विरलै भर्जिन गोर्डामा २० भिलाहरू सिजनको सुरूका लागि खुल्ला छन्
लिभरिक बे क्षेत्रमा भिलाहरूलाई मर्मतका लागि बढी समय चाहिन्छ
थप रूपमा, हामीसँग केवल अफशोरमा विलाहरू उपलब्ध छन्:
तेल नट बेमा5भिल्लाहरू खुला रहनेछन्
स्क्रब टापुमा villa विलाहरू खुला रहनेछन्
नेकर टापुमा भिलाहरू खुला रहनेछन्
लिटिल डिक्स बे होटेलले थैंक्सगिभ 2019 २०१ XNUMX पुनः खोल्ने मितिलाई लक्षित गर्दैछ